Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: May 2010
At least 80 killed in Lahore attacks ပါကစ္စတန်အကြမ်းဖက်မှု
At least 80 killed in Lahore attacks
ဗာဖလိုမြို.မှာကျင်းပပြီးစီးသွားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံကြီးကို ကြည့်ရှူကြပါ၊
Friday, 21 May 2010 21:11 ယင်းမွေခေါဝ်
နအဖမှ တောင်းဆိုထားသော ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းရေး လက်ခံခြင်း မရှိသေးသည့် ဗိုလ်ချုပ်ပန်ဖှ ခေါင်းဆောင်သော အပစ်ရပ်သျှမ်းပြည် တပ်မတော် တပ်မဟာ ၁ တွင်လည်း ၅၂ နှစ်မြောက် သျှမ်းပြည်တော်လှန်ရေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်စစ်ရေးပြအခမ်းအနားကျင်းပ ကြောင်း၊ တိုင်းပြည် အတွက် အသက်သွေးချွေးစွန့်လွှတ်ခဲ့သော အာဇာနည်ရဲဘော်များနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူပြီး နောက် နအဖတပ်၏ ဖမ်းဆီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်မှုခံခဲ့ကြရသော ရဲဘော်များကို အလေးပြုကြကြောင်း၊ ၎င်းတို့အားရည်စူး၍ ရဟန်းသံဃာအရှင်သူမြတ်တို့ကို ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရ သည်။
အပစ်ရပ် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် တပ်မဟာ ၁ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ပန်ဖှမှ စရဖ အရာရှိချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ထံ မေ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စာရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ပန်ဖှက “အမှိုက်ကစ ပြဿဒ်မီးလောင် မဖြစ်ချင်တာကြောင့် ကျနော်တို့ သည်းခံလာခဲ့ရတာလည်း ကြာခဲ့ပြီ။ နအဖစစ်တပ်က အပစ်ရပ် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် တပ်သားတွေဖြစ်မှန်းသိသိကြီးနဲ့ လာပြီး တိုက်ခိုက်တယ်။ ကျနော့်တပ်သားတွေကိုလဲ ဖမ်းဆီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်”ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
မြန်မာအမျိုးသမီးသည် ဧရာဝတီသတင်းဌာန၏လက်ရှိသတင်းထောက်သို.မဟုတ်ဧရာဝတီသတင်းထောက်အဟောင်းတစ် ယောက်ဖြစ်သည်ဟုထိုင်းသတင်းထောက်တွေကပြောဆိုနေကြပါသသည်၊ သူမသည် အန္တရာယ်ကင်းလွတ်ဇုံ၊ Pathumwanaram ပထုမ်ဝမ်နာရာမ် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသတင်းစုံစမ်းနေချိန်မှာ ရှပ်နီအုပ်စုတွေအိမ်ပြန်ချင်တဲ့အကြောင်း၊ စသည့်သတင်းအစအနပါသောသတင်းရေသားချက်ကို လွယ်အိတ်ထဲမှာရှပ်နီအစောင့်တွေရှာဖွေတွေ.ရှိမှုကြောင့်ယခုလိုဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည်၊
အမျိုးသမီးသတင်းထောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ရှပ်နီအစောင့်တွေက သူမကို ဇာတ်ခုံပေါ်မှာသယ်ဆောင်သွားဖို.ကြိုးစားနေ ပါသည်၊အခြားသောထိုင်းသတင်းထောက်တွေက သူမကိုကူညီဖို.ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်၊
Monday, May 17, 2010 11:33:54 PM
tukky_nt: Reds attacked Burmese journalist from Irrawady in Pathumwanaram Temple, claiming she distorted information reds wanted to go home:INN
Monday, May 17, 2010 11:32:34 PM
veen_NT: RT @suthichai: RT @jin_nation: TR @satien_nna: The Burmese journo is brought to Rajprasong stageี -http://tweetphoto.com/22910119
Monday, May 17, 2010 11:31:45 PM
veen_NT: RT @suthichai: RT @Orapim_NMG: TR @satien_nna: the Burmese journo photoี http://tweetphoto.com/22909814
Monday, May 17, 2010 11:31:14 PM
veen_NT: A Burmese journo intv women/kids at (weapon-free zone) at Wat Pathumwanaram was physically attacked by #redshirt protesters. TR @yoware
Monday, May 17, 2010 11:30:08 PM
tulsathit: INN saysaBurmese female reporter has been assaulted inside Pathumwanaram Temple, the temporary red shelter.
Monday, May 17, 2010 11:29:35 PM
Monday, 03 May 2010 18:36 မွေခေါဝ်
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ လုခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နားယန်း ကျေးရွာနေ အဖစိုင်းတိနှင့် အမိ နန်းလိုင်(နာမည်ရင်းမဟုတ်) တို့၏သမီး နန်းရွက်(အမည်ရင်းမဟုတ်) အား ဧပြီ ၂၄ ရက် (စနေနေ့) က စစ်ထွက်မြင့်ဆွေ ဦးဆောင်သည့် နမ့်လောင်းချောင်း သဲကျုံးရောင်းသည့် ရဲဘော်ဟောင်းအဖွဲ့က မုဒိမ်းပြု သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့လ နောက်ဆုံးပတ်ကပေါ့ ရွာနီးချုပ်စပ် သူမ ကျွဲကျောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ မိုင်းရယ်-သီပေါလမ်းမကြီး ဘေး နမ့်လောင်းချောင်းတံတားအပေါ်ဘက် သဲတူးဖို့်လာကြတဲ့ တပ်ရင်း(၆၄)မှစစ်ထွက် လေးယောက်က မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်” ဟု ရွာသားတစ်ဦးကပြောပါသည်။
“အလောင်းကို နားယန်းနဲ့ ဖာလုံဝက်အကွာ နမ့်လောင်းချောင်းသဲသောင်ပြင်မှာ ပစ်ထားခဲ့တယ်” ဟု လည်း အဆိုပါရွာသားက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ဆက်လက်ပြောပြပါသည်။
(၂၅၃) ကြိမ်မြောက်ဟံသာဝတီမွန်နေပြည်တော်ကျဆုံးသည့်နေ.အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊မဟာချိုင်းမှာမွန်အလုပ် သမားများစည်းကားစွာကျင်းပပြီးစီး၊